အိန္ဒိယ: | နည်းပညာထမ်းရွက် Grylls "လူ Vs ရိုင်း" တွင်ဟိန်ဒီနားလည်ကူညီပေးခဲ့တယ်, လေးမိုဒီကပြောပါတယ် အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ | က Man Vs ရိုင်း ":" အိန္ဒိယနည်းပညာထမ်းရွက် Grylls အတွက်ဟိန်ဒီနားလည်ကူညီပေးခဲ့တယ် "pm တွင်မိုဒီကပြောပါတယ် အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: | နည်းပညာထမ်းရွက် Grylls "လူ Vs ရိုင်း" တွင်ဟိန်ဒီနားလည်ကူညီပေးခဲ့တယ်, လေးမိုဒီကပြောပါတယ် အိန္ဒိယသတင်း
X အီးမေးလ်ပို့ရန်0 Reddit1 Stumbleupon0
အိန္ဒိယ: ဘယ်လို ဝက်ဝံ Grylls သူကဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ပြောဆိုသောထားပါတယ် Narendra Modi '' ၏အထူးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် က Man Vs တောရိုင်း '' နာမည်ကျော်စွန့်စားခြင်းနှင့် surviviste ၏ထိုအချိန်ကဟိန်ဒီနားမလညျပါသလဲ? - ဤများစွာသောလူပြပွဲကိုကြည့်ပြီးနောက်မေးခွန်းထုတ်သောမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။
PM မိုဒီ မိမိအလစဉ်ရေဒီယို show ကို '' မန်း Ki Baat '၌တနင်္ဂနွေမှာ "လျှို့ဝှက်ချက်" ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူကနည်းပညာကိုကျယ်ပြန့်သည့်ဂျင်မ် Corbett အမျိုးသားဥယျာဉ်အတွင်းရှိလူနှစ်ဦးအကြားစကားပြောဆိုမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
ငါပြောသောအခါတိုင်း "ကချက်ချင်း English သို့ဘာသာပြန်ထားသောခဲ့သည်။ ဝက်ဝံ Grylls နားမှသေးငယ်တဲ့ကြိုးမဲ့စက်ကိရိယာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ဟိန်ဒီတွင်ပြောနေတာခံခဲ့ရသူအင်္ဂလိပ်လိုသည်ကြား ... ဆက်သွယ်ရေးအလွန်လွယ်ကူဖြစ်လာခဲ့သည်။ နည်းပညာ၏အံ့သြဖွယ်ရှုထောင့် "ဟုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောသည်။
သူကလူ Grylls ဟိန်ဒီနားလည်နိုင်ဘယ်လိုသူ့ကိုမေးကြောင်း, အချို့မဆိုင်းမတွနှင့်အတူကပြောသည်။
"ဒီဇာတ်လမ်းတွဲသူနောက်ပိုင်းတွင်တပ်ဆင်ထားခဲ့သလဲ သူမဤဇာတ်လမ်းပိုင်းနှင့်မည်သို့များအတွက်ကျင်းပဘယ်လိုမကြာခဏပစ်ခတ်မှု? ဒါဟာအကြောင်းကိုအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ရှိတယ် ... အကြီးသိချင်စိတ်နှငျ့အတူရှိ၏။ လူအတော်များများထို့နောက်ငါသည်ဤလျှို့ဝှက်ချက်ကိုထုတ်ဖေါ်လိမ့်မယ်, စိတျထဲတှငျဤမေးခွန်းကိုရှိသည်။ တစ်လမ်းအတွက်ကြောင့်လျှို့ဝှက်မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်တော့, နည်းပညာကျယ်ပြန့်ထမ်းရွက် Grylls နဲ့ငါ့စကားပြောဆိုမှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီး, "ဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကပြောကြားခဲ့သည်။
ထုတ်လွှင့်အစီအစဉ်ကိုပွီးနောကျ, လူအတော်များများဟာဂျင်မ် Corbett အမျိုးသားဥယျာဉ်ဆွေးနွေးသူကပြောသည်။
"သင်လည်းသဘောသဘာဝ, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်မှဆက်စပ်က်ဘ်ဆိုက်များသို့သွားရောက်သင့်ပါတယ်။ ငါမတိုင်မီကလည်း, ငါအလေးပေးပြောကြားထားသကဲ့သို့, သင်သည်သင်၏အသက်တာ၏အရှေ့မြောက်ဘက်သို့သွားရောက်ရပါမယ် "ဟုသူကပြောသည်။
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးနှင့်သန့်ရှင်းမှု - သဘာဝတရားလမ်းလျှောက်ပြီးယာယီလှေထဲမှာအအေးမိမြစ်ပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်သူနှလုံးနီးစပ်သူအကြောင်းတရားများမြှင့်တင်ရန် Grylls နှင့်အတူပူးပေါင်းအဖြစ်မိုဒီကိုထောက်ပံ့သောအရာတို့ကိုတချို့ရှိနေပါတယ်။
အိန္ဒိယ: ကက်ရှမီးယားအတွက်လူနည်းစုရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏အသင်းနှင့် 27 28 သြဂုတ်လဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းဖော်ထုတ်ရန်: Naqvi | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: အိန္ဒိယနှင့်ဘာရိန်းအခြားနိုင်ငံများဆန့်ကျင်အကြမ်းဖက်ဝါဒ၏အသုံးပြုမှုကိုငြင်းပယ်ဖို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝုိင်းအပေါ်ကိုခေါ် | အိန္ဒိယသတင်း